KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Beresosɛm Nhoma a Ɛto So Abien 16:1-14
Asa ne Siria yɛɛ apam (1-6)
Hanani kaa Asa anim (7-10)
Asa wui (11-14)
16 Asa ahenni afe a ɛto so 36 mu no, Israel hene Baasa+ baa Yuda so, na ofii ase sɛ ɔresan akyekye Rama+ kurow no* sɛnea ɛbɛyɛ a obiara rentumi mfi Yuda hene Asa nkyɛn mma anaa obiara rentumi nkɔ ne nkyɛn.*+ 2 Ɛnna Asa yii dwetɛ ne sika kɔkɔɔ fii Yehowa fi+ ne ahemfi* akorade mu de kɔmaa Siria hene Ben-Hadad+ a ɔte Damasko no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: 3 “Apam* da me ne wo ntam, ne me papa ne wo papa ntam. Merebrɛ wo dwetɛ ne sika kɔkɔɔ. Bra na betwa apam* a wo ne Israel hene Baasa ayɛ no mu na omfi me so nkɔ.” 4 Ben-Hadad tiee Ɔhene Asa, na ɔsomaa n’asahene kɔɔ Israel nkurow so, na wɔko faa Eyon,+ Dan,+ Abel-Maim, ne Naftali nkurow mu akorae nyinaa.+ 5 Bere a Baasa tee no, ntɛm ara na ogyaee Rama kyekye.* 6 Ɛnna Ɔhene Asa de Yuda nyinaa kɔe, na wɔkɔsesaw abo ne nnua a na Baasa de rekyekye Rama+ no, na ɔde kɔkyekyee Geba+ ne Mispa.*+ 7 Saa bere no, ɔdehwɛfo Hanani+ baa Yuda hene Asa nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Esiane sɛ wode wo ho ato Siria hene so na woamfa wo ho anto Yehowa, wo Nyankopɔn so nti, Siria hene asraafodɔm no ade wɔn ho afi wo nsam.+ 8 Etiopiafo ne Libiafo no, na wɔnyɛ asraafo bebree a wɔwɔ nteaseɛnam ne asraafo pii a wɔtete apɔnkɔ so anaa? Nanso bere a wode wo ho too Yehowa so no, ɔde wɔn hyɛɛ wo nsa.+ 9 Yehowa aniwa kyini asaase so baabiara+ sɛ ɔde n’ahoɔden bedi ama* wɔn a wɔn koma di mu wɔ ne ho.+ Nea woayɛ yi de, woadi nkwaseasɛm, na efi nnɛ rekɔ, akodi bɛba wo so.”+ 10 Nanso asɛm no maa Asa ani beree ɔdehwɛfo no so. Ne bo fuw no ara ma ɔde no too afiase.* Saa bere no ara nso, Asa fii ase dii ɔmanfo no binom ani. 11 Asa ho nsɛm nyinaa, efi mfiase kosi awiei, wɔakyerɛw wɔ Yuda ne Israel Ahemfo Nhoma no mu.+ 12 Asa ahenni afe a ɛto so 39 mu no, ɔyaree ne nan, na ne yare no mu yɛɛ den yiye. Ne yare mu mpo, wanhwehwɛ Yehowa akyi kwan na mmom okodii ayaresafo akyi. 13 Na Asa ne n’agyanom kɔdae;+ owui n’ahenni afe a ɛto so 41 mu. 14 Enti ɔda kama bi a n’ankasa bɔe wɔ Dawid Kurow mu+ na wosiee no wom; wɔde no too mpa so, na na balsam ngo ne sradehuam ahorow a wɔahyɛ da afra nso ayɛ so ma.+ Afei nso, wɔsɔɔ ogya kɛse paa* de yɛɛ no ayi.
^ Anaa “ɔresiesie Rama ma ayɛ den.”
^ Anaa “obiara rentumi mfi Yuda hene Asa asaase so mma anaa obiara rentumi nkɔ hɔ.”
^ Anaa “nhyehyɛe.”
^ Anaa “Rama a ɔresiesie ma ayɛ den no.”
^ Anaa “ɔde kɔhyɛɛ Geba ne Mispa nkurow no den.”
^ Anaa “sɛ obedi aboa.”
^ Nt., “ɔde no bɔɔ dua mu wɔ nneduafi.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ nnuhuam na wɔhyewee, na ɛnyɛ sɛ wɔhyew Asa amu.